April 1, 2019 – Myanmar Peace Monitor
Two Villagers Shot Dead in Latest Fighting in Myanmar’s Rakhine State Two Women Killed by Gunfire in Mrauk-U Myanmar Government Sorry About Fighting in Rakhine State Myanmar army has developed new 105mm light tank based on 2S1 chassis UWSA SALES
Staff April 1, 2019 Peace related news headline No Comments Read more
နှစ်ဖက်တင်းမာမှုများ ဖြေလျှော့နိုင်မှ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဟု JMC–U ဒုဥက္ကဌ ပြော
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှစ်ဖက်တပ်များ တင်းမာမှုအခြေအနေများ ကို ဖြေလျှော့နိုင်မှသာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဟု ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC_U) ဒုတိယ ဥက္ကဌ(၂) သူရဦးဘိုနီက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ဖားအံမြို့၊ ဇွဲကပင် သဘာဝဟိုတယ်၌ ယမန်နေ့( မတ် ၃ဝရက်)က JMC မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် ̔ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှှု ရပ်စဲ ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ယုံကြည်မှှုတည်ဆောက်ခြင်း၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ ပညာရှင်များ စကားဝိုင်း̕ တွင် ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး
Nang Pu will be released two months early for health reasons.
A court in Kachin State reduced the prison sentence of activist Nang Pu on Friday by two months over concerns for her health. She was originally sentenced to six months in prison in January for her role in organizing a
Kachin Cultural Association Opposes Pressure to Revive Myitsone Dam
The Kachin National Association of Tradition and Culture (Myanmar) releasedanine-point statement on Thursday standing against any resumption of the China-backed Myitsone hydropower project in Kachin State. Hpre Hkaw Luk, secretary of the association, spoke about the decision to